Idaacada Daljir ayaa lagu xirey amar kasoo baxey Madaxweynaha Puntland kadib markii ay wareysi ka qaadey gudoomiyahii hore ee gobolka Barri Candisamad Galan.
Xariga Idaacada oo aan loo cuskan wax sharci ah ayaa waxaa cambaareeyey dhamaan hay'adaha u dooda xuquuqda saxaafada.
Xariga loo gaysto saxafiyiinta Iyo Idaacadaha ayaa xukuumada maaxweyne Cabdiweli Gaas ku soo oogin wax dambi ah iyadoo dib xoriyadood ugu soo celisa muddo kadib.
Horey ayey aheyd markii Wariye ka tirsan talefishinka Somali Chanel muddo 15 Cisho ah ugu xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Garowe isaga oo dib xoriyadiisa loo siiyey isaga oo aan lagu soo oogin wax dambi ah.
Maamulka Radio Daljir oo la soo xiriirey GO ayaa u Mahad celinaya dhamaan dadkii taagerada u muujiyey muddadii ay sharci darada ku xirnaayeen.
Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, ayaa hogaanka Puntland loo doortay horraantii sannadkii 2014 doorasho ka dhacday magaalo madaxda Puntland ee Garowe, wuxuuna waqtigii uu loollanka ku jiray sameeyay ballanqaadyo kala duwan oo badankood waxba ka hirgalin.
Arrimaha sida aadka ah madax ...
Puntland 24.02.2017. 23:01
Xukuumada Madaxweyne Gaas oo digniin u dirtey odey dhaqameedka Puntland [AKHRI]
Puntland 30.09.2016. 12:03